साधारण अपाङ्गता भएका मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा जान मिल्छ कि मिल्दैन ?
Mon, Dec 09, 2019 | 17:32:37 NST
10:27 AM (6 years ago)
प्रश्न : साधारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु वैदेशिक रोजगारका लागि जान मिल्छ कि मिल्दैन् ?
उत्तरः बलबहादुर तामाङ, अध्यक्ष वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान मिल्दैन । नेपलमा मेडिकल गरिसकेपछि फिट हुने व्यक्तिहरु मात्र त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्छन् । शारीरिक रुपमा तन्दुरुस्त मान्छे मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान मिल्ने भएकाले उहाँले केही सीप सिकेर यहीँ काम गर्दा राम्रो हुन्छ ।